Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Aeromexico dia manampy fiaramanidina Boeing 28 vaovao ho an'ny fiaramanidina
Aeromexico dia nahatratra ny fifanarahana momba ny fitomboan'ny sambo marobe
Aeromexico hividy fiaramanidina Boeing 737 vaovao efatra amby roapolo, ao anatin'izany ny B737-8 sy B737-9 MAX
Aeromexico dia manampy fiaramanidina Dreamliner efatra 787-9 ho an'ny fiaramanidina
Ireo fifanakalozana ireo dia maneho ny zava-bita lehibe tamin'ny fanovana an'i Aeromexico ho an'ny taona ho avy
Nahazo fifanarahana i Aeromexico hampitombo ny sambony miaraka amin'ny vaovao efatra amby roapolo (24) Boeing 737 ny fiaramanidina, ao anatin'izany ny B737-8 sy B737-9 MAX, ary ny fiaramanidina efatra (4) 787-9 Dreamliner ho anisan'ny fifanarahana namboarina tamin'ny fiaramanidina niaraka tamin'ny mpanamboatra sy ireo mpampidina kely hampiditra fiaramanidina vaovao. Ireo mpamatsy sy orinasa ara-bola hafa koa dia nandray anjara tamin'ireny fifanakalozana ireny, ka nahatonga ny fifanarahana feno izay manome tombony maro ho an'ny mpitatitra.
Ny fanampiana ny fiaramanidina voalohany dia nokasaina tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny serivisy sivy (9) hanomboka amin'ity vanin-taona fahavaratra ity, ary ny ambiny ho tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021 ary mandritra ny 2022. Ireo fifanakalozana ireo dia manan-tantara lehibe amin'ny Aeromexicony fanovana ho an'ny taona ho avy, ary ny fe-potoana iasan'izy ireo dia mifaninana tokoa raha oharina amin'ny haavon'ny tsena ankehitriny.
Ireo fifanakalozana ireo dia ahafahan'ny Aeromexico manova ny fifanarahana fikolokoloana maharitra sy hampihena ny vidin'ny fanofana fiaramanidina 18 (2) hafa izay ao anatin'ny andian-tsambo ankehitriny. Tombanan'i Aeromexico fa ny fanatontosana io fifanarahana feno io dia hitarika amin'ny fitehirizana manodidina ny XNUMX lavitrisa dolara.
Noho ny tahiry, ny orinasa dia afaka manolotra saran-dàlana mifaninana bebe kokoa, manome antoka ny traikefa fitsangatsanganana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny fiaramanidina manara-penitra miaraka amin'ny serivisy eto an-toerana sy anaty sidina izay Aeromexico ihany no manolotra.
Ireo fifanarahana feno dia miankina amin'ny fankatoavan'ny fitsarana amerikana ho an'ny distrika atsimon'i New York, miadidy ny fizotran'ny famerenam-bola an-tsitrapo an'i Aeromexico Toko 11.